Otu esi eme ka igwe na ngwa ngwa jiri usoro 9 a | Gam akporosis
Ignacio Sala | 22/07/2021 18:00 | Ngwa gam akporo, Gam akporo Ndị aghụghọ
Ọtụtụ bụ ndị ọrụ na-ajụ anyị maka Atụmatụ ma ọ bụ aghụghọ na mee ka mkpanaka gaa ngwa ngwa. Enweghị aghụghọ ọ bụla na-enweghị agha na-arụ ọrụ, ebe ọ bụ na anyị enweghị nhọrọ ịmepe ọdụ ka ịgbatị ohere nchekwa, tinyekwu RAM, gbanwee processor ...
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ka ọnụ gị rụọ ọrụ dị ka ụbọchị mbụ, naanị ihe ị ga - eme bụ ịgbaso nke ọ bụla Atụmatụ anyị na-egosi gị n'isiokwu a, Atụmatụ na njikọta na ndị ọzọ ma ọ bụ n'otu n'otu, ga-enweta afọ ole na ole na ngwaọrụ gị.
1 Malitegharịa ekwentị ya oge niile
2 Hapụ ohere site na ihichapụ faịlụ ndị ị na-ejighi
3 Hichapụ ngwa ndị ị na-ejighi
4 Kọwaa oghere ngwa ahụ
5 Jiri webapps ma ọ bụ Lite nsụgharị
6 Gbanyụọ eserese sistemụ
7 Wụnye ụdị sistemụ arụmọrụ kachasị ọhụrụ dị mgbe niile
8 Tọgharia ụlọ ọrụ mmepụta ihe
9 Nginggbanwe batrị bụkwa nhọrọ
Malitegharịa ekwentị ya oge niile
Ngwaọrụ elektrọnik nke sistemụ arụmọrụ nwere ike itinye ya, chọrọ mmetụta ịhụnanya n'aka ndị ọrụ. Nke ahụ bụ, dịka mmadụ na anụmanụ, anyị kwesịrị ihi ụra iji gaa n'ihu na-arụ ọrụ, igwe elektrọnik kwesịrị ịdị na-ezu ike site n'oge ruo n'oge, site na ịmalitegharia ha ma ọ bụ gbanyụọ ha oge niile.
Dị ka mgbe anyị zuru ike, anyị na-ebili n'ike, a ngwaọrụ mgbe ibidogharịa ọ ga-enye ya kacha mmaAgbanyeghi na emebere ha ka ha diri ubochi ole na ole, mgbe itughari ha, ha na etinye ihe na ebe nchekwa RAM, mechie ihe nile mepere emepe ma mepee ndi ha choro iru.
Na-enweghị ka awa na-aga, ngwaọrụ ahụ na-aga na-egosi mgbaàmà nke ike ọgwụgwụ, anyị na-eche ihu ihe ngosi doro anya na ịkwesịrị izu ike, ma ọ bụ site na ịgbanyụ ya ma ọ bụ ịmalitegharịa ya ozugbo.
Hapụ ohere site na ihichapụ faịlụ ndị ị na-ejighi
Sistemụ arụmọrụ ọ bụla ebe etinyere ngwa, anyị na-alaghachi na ntọala nke isi ihe gara aga, chọrọ ohere nchekwa n'efu iji rụọ ọrụ. Mgbe kọmputa Windows (iji were ihe atụ nke mere anyị niile) gafere na ohere na diski ike, kọmputa ahụ na-amalite iji nwayọ nwayọ karịa na mbụ.
Otu ihe ahụ na-eme na gam akporo, dịka na iOS, macOS, Linux na sistemụ arụmọrụ ọ bụla. Idebe ama ama anyị n’efu bụ otu n’ime ụzọ kacha mma smartphone anyị na-aga n'ihu na-arụ ọrụ dị ka ụbọchị mbụ. Otu n'ime ngwa kachasị mma iji hichapụ faịlụ ndị anyị na-ebudata na ama anyị yana na anyị anaghịzi echeta faịlụ na Google.
Hichapụ ngwa ndị ị na-ejighi
Ngwa ọ bụla anyị rụnyere na ngwaọrụ mkpanaka anyị, gbanwee android ndekọ, ya mere na ogologo oge, oge ọ bụla anyị malitere ọnụ anyị, ọ na-eme nlele nyocha ma na-ebu ọtụtụ usoro data n'ime usoro ahụ. Usoro a ọ bụghị naanị na-ebelata oge mmalite nke ama anyị, mana ọ na-emetụtakwa arụmọrụ ya.
Ọ bụrụ na anyị chọrọ ka smartphone anyị rụọ ọrụ dị ka ụbọchị mbụ, dị ka ọ dị ọhụrụ na igbe ahụ, anyị ga-anwa idobe naanị ngwa ndị anyị nwere ike ịdị mkpa kwa oge ma ọ bụ site n'oge ụfọdụ.
Dika ebe nchekwa nke smartphones abawanyewo, ọrụ a adịwanye mgbagwoju anya, ebe ọ bụ na ọtụtụ ndị bụ ndị ọrụ na-echere ịhụ ozi nke ezughị oke iji mee ihe. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmata ngwa ndị ị jiri opekata mpe na ekwentị gị, ịnwere ike iji ngwa faịlụ sitere na Google.
Ngwa Google faịlụ ga-agwa gị maka ngwa niile ị rụnyere na ọnụ gị yana nke oge agafeela kemgbe oge ikpeazụ ị jiri ya. Ihe omuma a gha enyere anyi aka imata ngwa nke foduru na ngwa ayi.
Kọwaa oghere ngwa ahụ
Ọ bụrụ na ọ bụghị ọnụ niile na-arụ ọrụ nwayọ, mana arụmọrụ na-ebelata ọ bụ kwesiri ngosi na ụfọdụ ngwa,, anyị kwesịrị ile anya na ngwa nkọwa ma kpochapụ oghere. Ọ bụrụ na ọ ka na-arụ ọrụ n'amaghị ama, anyị nwere ike ịga n'ihu wepu ya ma tinye ya ọzọ.
Ọ bụrụ na ọ dị, ọ nweghị ụzọ ọ ga-esi rụọ ọrụ nke ọma, naanị ihe ngwọta anyị hapụrụ bụ iji ụdị Lite ma ọ bụrụ na ọ dị ma ọ bụ ụdị WebApp, nsụgharị ndị anyị na-akọwa na ngalaba na-esote.
Jiri webapps ma ọ bụ Lite nsụgharị
Lite nsụgharị nke ngwa, mgbe ọ dị, bụ nsụgharị ogide na-erughị 2 MB nke na-agụnyeghị ọtụtụ ọrụ anyị nwere ike ịchọta na ngwa nkịtị, iji gosi ọdịiche ha n'ụzọ ụfọdụ.
Ezubere nsụgharị Lite maka obere-ọgwụgwụ ọnụ na tumadi gbakwasara abụrụ ahịa. Ọ bụrụ n’ịchọtaghị ụdị ngwa Lite nke ngwa ịchọrọ na Storelọ Ahịa Play, ị nwere ike ịgafe ebe nchekwa APKMirror.
A WebApp, dịka anyị nwere ike isi chọpụta aha ya, abụghị ihe ọzọ a web version nke ngwa. Typesdị ngwa ndị a bụ ụdị nnweta nnweta na webụsaịtị nke ndị na-eweta ọrụ, mana na-egosighi interface nchọgharị, na-egosi interface maka ngwaọrụ mkpanaka n'otu ụzọ ahụ egosiri na weebụsaịtị ya.
Dabere na ihe nchọgharị nke na-ejikọ na sava ọrụ, ekwesighi imelite ya, ma ọ bụrụ na emee mgbanwe ọ bụla na arụ ọrụ ma ọ bụ ọrụ, anyị ga-ahụ ka ọ gosipụtara mgbe anyị mepere ngwa ahụ.
Gbanyụọ eserese sistemụ
Ka-eme ihe n'eziokwu. Anyị niile nwere sistemụ arụmọrụ iji gosi anyị ihe ngosi mgbe imeghe ngwa, ịnweta menu ntọala, imechi ngwa ... Agbanyeghị, mmegharị ndị a chọrọ ike eserese nke na-abụghị ndị njedebe niile nwere ike ịnye ọfụma.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịkwụghachi arụmọrụ nke ọnụ gị n’elu aesthetics, ị kwesịrị ị na-eche banyere wepụ mmegharị. Iji wepu animations na gam akporo, ị ga-ebu ụzọ rụọ ọrụ nhọrọ ndị nrụpụta (site na ịpị ọtụtụ ugboro na nọmba ụlọ ahụ).
Ozugbo ị megharịrị ọnọdụ onye nrụpụta, ị ga-enyerịrị menu ọhụụ nke pụtara na njedebe anyị na otu aha ma chọọ nhọrọ nke na-enye anyị ohere ịgbanwe ọrụ nke ihe ndị ahụ, ma ọ bụ iji belata ma ọ bụ gbatịa oge ha ga-adị ma ọ bụ gbanyụọ ha kpamkpam.
Wụnye ụdị sistemụ arụmọrụ kachasị ọhụrụ dị mgbe niile
Mgbe ọ bụla onye nrụpụta anyị nyere anyị nhọrọ ahụ, anyị ga-anwale wụnye ụdị kachasị dị ugbu a nke sistemụ arụmọrụ maka ọnụ anyị. N'ọtụtụ oge, onye nrụpụta arụ ọrụ iji mee ka mmiri na arụmọrụ nke ọnụ ọgụgụ ahụ dị elu, n'agbanyeghị na n'oge ndị ọzọ, ọ kachasị njọ anyị nwere ike ime.
Na mgbe m kwuru na ọ bụ ihe kachasị njọ anyị nwere ike ime ya bụ n'ihi ịbụ sistemụ arụmọrụ ọhụrụ, ma ọ bụrụ na anyị na nsọtụ ya na-ama limping na nke ugbu a version, O yikarịrị ka ọ bụrụ na nsụgharị ọhụrụ ahụ, arụmọrụ ahụ ga-aka njọ.
Tupu imelite, ọ bụrụ na anyị chọrọ ijide n'aka na arụmọrụ agaghị emetụta, Anyị kwesịrị ịgagharị na YouTube wee chọọ vidiyo nke ọdụ anyị na ụdị Android nke anyị nwere iji wụnye.
Site na Androidsis anyị na-akwado gị mgbe niile wụnye ọ bụla melite kwalitere site na ndị nrụpụta ebe ọ bụ ụzọ kachasị mma iji chekwaa ọnụ anyị oge niile megide enweghị ike nchekwa ọ bụla.
Tọgharia ụlọ ọrụ mmepụta ihe
Ọ bụrụ na arụmọrụ nke ọnụ gị abụghị otu mgbe ị wepụrụ ya na igbe na ịchọrọ ịcheta oge ndị ahụ mgbe ọ na-arụ ọrụ nke ọma, na-enweghị ike ịdaba na ịrụ ọrụ ndị dị mfe, imeghe igwefoto ma ọ bụ ngwa ngwa, ọ dịghị ewute ya iji tọgharịa ngwaọrụ anyị site na ncha.
Tọgharia ngwaọrụ efu pụtara wepu ọdịnaya niile kpamkpam na anyị echekwala na ọdụ anyị, gụnyere foto, vidiyo na nke ọ bụla nke ngwa arụnyere. N'ụzọ dị otú a, ọnụ ga-alaghachi iji gosipụta otu arụmọrụ dị ka ụbọchị mbụ.
Usoro iji weghachite ngwaọrụ ahụ, ekele maka mmekọrịta nke Google na igwe ojii Ọ dị mfe na ngwa ngwa (n'agbanyeghị oge ole ọ ga-ewe ka ọnụ anyị mee usoro ahụ). Google na-emekọrịta site na akaụntụ email ejiri ekwentị ma usoro, kalenda, ọrụ na ọbụnadị na-enye anyị ohere ịme akwụkwọ nke ihe dị ezigbo mkpa: foto na vidiyo.
Ozugbo anyị weghachite ọnụ, anyị ga-abanye data nke otu akaụntụ Google ka e wee depụta data nke usoro ihe omume, kalenda na ndị ọzọ na ngwaọrụ ahụ weghachite ndabere nke foto na vidiyo, iji nweta ọdịnaya kachasị dị anyị mkpa ọzọ.
Nginggbanwe batrị bụkwa nhọrọ
Nhọrọ ikpeazụ anyị hapụrụ maka ama anyị iji nwetaghachi arụmọrụ nke oge gara aga bụ ịgbanwe batrị. Fọdụ ndị nrụpụta dịka Apple tinyere aka na esemokwu maka ịgbakwunye ọrụ zoro ezo na iOS nke belata arụmọrụ nke njedebe mgbe batrị dị n'okpuru 80% nke ikike ya, iji mee ya. gbochie ọnụ ya imechi na mberede.
E boro Samsung ebubo otu ihe ahụ obere oge, n'agbanyeghị enweghị ike igosipụta otu omume ahụ. O yikarịrị ka ụfọdụ ndị nrụpụta etinyego ọrụ yiri nke a na ebumnuche ahụ, iji gbochie ọnụ ka ọ gbanyụọ na mberede wee hapụ anyị ka anyị nwee nsogbu, ọ bụ ezie na anyị nwere anya ọjọọ, a ga-ewere ya dị ka otu ihe akaebe nke ịla n'iyi.
Ọ bụrụ na ọnụ gị karịrị afọ 2, batrị nọ na nke kacha njọ. Ọ bụrụ n’abụghị n’obi imeghari ọnụ gị n’ihi na nke ị nwere ọrụ, ihe dị ọnụ ala bụ ịgbanwe batrị ahụ. O yikarịrị ka mgbe mgbanwe ahụ gasịrị, ị ga-enwetaghachi ọsọ ọsọ nke ị rụchara ụbọchị mbụ ị wepụtara ya na igbe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Gam akporo Ndị aghụghọ » Otu esi eme ka mkpanaka gị na-aga ngwa ngwa na usoro 9 ndị a